Ụfọdụ akụkọ zuru oke, nke Domingo Villar dere. Nyocha | Akwụkwọ ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Akụkọ
Ụfọdụ akụkọ zuru oke bụ aha akwụkwọ ọhụrụ ahụ site Sunday Villar, nke e ji ihe atụ mee linocuts nke enyi ya Carlos Baonza. A na-ebipụta ya nke ọma na enwere ike ịgụ ya n'etiti ehihie, ma ọ bụ obere. Ọ bụ mkpokọta nke Akụkọ 10 ma ọ bụ akụkọ mkpirikpi na enwere m ọchichị na onye ode akwụkwọ ahụ nyefere m ya na ngosi akwụkwọ ngosi Madrid ikpeazụ. Nke a bụ nke m nyocha.
0.1 Ihe ùgwù
2 Ọchị, nostalgia, anwansi, ihe omimi
Na Jenụwarị 2020, agara m otu zutere ya na Domingo haziri Omenala Omenala na Madrid ma dezie ya Raphael Caunedo. Anyị dị ihe dị ka mmadụ iri abụọ ma anyị nwere ọmarịcha mkparịta ụka maka ya gbasara akwụkwọ ya na -agụ onye nyocha si Vigo Leo Caldas. Akwụkwọ akụkọ atọ, Anya mmiri, Usọ osimiri nke mmiri riri y Shipgbọ mmiri ikpeazụ na, n'agbanyeghị na ogologo oge dị n'etiti akwụkwọ ya, ha ewetarala ya ihe ịga nke ọma na, nke kachasị, ugwu nke ọtụtụ ndị ọzọ nwere aha 20 ga -amasị.
N'akụkụ ikpeazụ nke nzukọ Sọnde ọ kọọrọ anyị gbasara akụkọ ndị a ọ gụkwara anyị otu. Obi tọrọ anyị ụtọ nke ukwuu ma gbaa anyị ume nke ukwuu nke mere o ji bipụta ha na ọ bụrụ na ọ nwere ike nwee echiche ime otú ahụ, anyị nwere ike kwenye kpamkpam. Na mgbakwunye, ọ nwekwara ike bụrụ ụzọ '' ịkwụ ụgwọ '' onwe anyị maka ndidi n'ihi ogologo nchere dị n'etiti akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ ọgụgụ nke anyị maara ọtụtụ ndị na -agụ ya. Yabụ, ọ bụ ihe ùgwù.
Ugbu a, ka m gụchara akụkọ, m na -achọpụta akụkọ a: ọ gbasara Don Andrés mara mma. O meela ka m mụmụọ ọnụ ọchị ọzọ. Ọfọn, ihe niile n'ezie.
Site na Okwu mmalite, onye edemede na -agwa anyị ntakịrị gbasara otu esi eme ya nwere akụkọ mgbe niile na -enweghị nkwupụta ọzọ karịa ịkekọrịta ma ọ bụ gụọ ha nnọkọ ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi. Ọzọkwa, na ebipụtala ụfọdụ na na mgbe ọ bụla ha gbara ya ume ka ọ nye ha ụdị akwụkwọ, ọ na -eme ka ọ chọrọ ịhapụ ha maka ebe ahụ nwere mmekọrịta chiri anya na nso.
N'otu oge ahụ, na maka ọbụbụenyi ya na onye na -ese ihe Carlos Baonza, onye bidoro na -egosi ha na ijiji ka ọ na -agụ ha. Ma mgbe ahụ na -abịa arụmụka dị egwu dị ka eziokwu nke a oria ojoo nke na -akpọchi ụwa n'ụlọ. Ma ị ga -agba mbọ ịmegharị oge kacha mma nke ị na -enweghị ike ịnwe ma ọ bụ kesaa. Yabụ na ọ bụ oge iwepụta akụkọ ndị a.
Ọchị, nostalgia, anwansi, ihe omimi
Aha ndị bụ:
Eliška na ọnwa
La Maruxaina na Maazị Guillet
Onye mgbaasị nke O Grove
Saint nke Bella Union
Philip onye Mesaya
Mabel na ndị na -ekwu okwu
Don Andrés mara mma
Michael “Chico” Cruz
Afọ iri na ise nke Isabel Daponte
Na ihe niile, ka ukwuu ma ọ bụ obere, nwee mmetụ na-enweghị ọhụụ, laghachi na Pasado, na magia, ihe omimi na, n'ezie, nke ọchị, mana nke ala Galili nke Villar bụ nke ya. Ogologo oge bụ nke ikpeazụ, akụkọ dị mkpirikpi karịa akụkọ. Na ihe kwa òkè bụ ụda egwu nke akụkọ onye edemede a, nke mara mma dịka ọ mara mma na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ abụ.
Maka ndị anyị maara ntakịrị banyere akụkụ aseptic kacha arụ ọrụ na arụ ọrụ asụsụ, na mgbakwunye na ezi uche enwere ike ibunye, ịgụ Domingo Villar bụ obi ụtọ abụọ. Ma n'akwụkwọ akụkọ ya na n'ime akụkọ ndị a, nke nwere ike bụrụ nke pụtara ìhè karịa, njikwa o nwere maka ya na ikike na ritmo akụkọ nke na -ebipụta ọdịnaya adịghị nke abụọ. A na -enwe ekele maka nke a na panorama nke akwụkwọ dị mfe ma ọ bụ dị mfe mgbaze.
Akụkọ ndị a na -agụ dị ka abụ ha na -ahapụkwa nkuzi na akara, nke oke osimiri, nke kpakpando, akụkọ ifo na akụkọ mgbe ochie, ọrụ ebube ma ọ bụ mmụọ, agha na udo. Ha na -amụmụ ọnụ ọchị site n'aka ndị ahụ dị nro ha na -atụkwa gị aka na ndabere anwansi nke na -agbagọ ụdị ala a.
Nọnyere otu? Enwenwughị m ike. NA a mana? Na ha dị ole na ole na ha na -akwụsị ngwa ngwa. Nke ahụ bụ nsogbu Domingo Villar: ọ baghị uru ma ọ bụrụ na o dee akwụkwọ akụkọ nwere peeji 640 ma ọ bụ akụkọ mkpụrụ okwu 1. Ọ na -ahapụ gị mgbe niile ịchọrọ karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Ụfọdụ akụkọ zuru oke, nke Domingo Villar dere. Nyochaa